Xinhua Myanmar - လက်ဘနွန်နိုင်ငံရှိ Qaraoun ရေကန်ကြီးတွင် ရေညစ်ညမ်းမှုကြောင့် ငါးအမြောက်အမြားသေဆုံးမှုဖြစ်ပွား
လက်ဘနွန်နိုင်ငံရှိ Qaraoun ရေကန်ကြီးတွင် ရေညစ်ညမ်းမှုကြောင့် ငါးများသေဆုံးနေသည်ကို ဧပြီ ၃၀ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ) Africa & Middle East
လက်ဘနွန်နိုင်ငံရှိ Qaraoun ရေကန်ကြီးတွင် ရေညစ်ညမ်းမှုကြောင့် ငါးများသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် ဧပြီ ၃၀ ရက်က အလုပ်သမားများ ရှင်းလင်းနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
လက်ဘနွန်နိုင်ငံရှိ Qaraoun ရေကန်ကြီးတွင် ရေညစ်ညမ်းမှုကြောင့် ငါးများသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် ဧပြီ ၃၀ ရက်က ငါးသေများအား အနီးအနားတွင် မြေမြှုပ်သင်္ဂြိုဟ်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ထိုသို့ ကန်ထဲရှိငါးများ အမြောက်အမြားသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားရခြင်းမှာ Qaraoun ရေကန်ကြီးထဲသို့ စီးဝင်လာသည့် Litani မြစ်တစ်လျှောက်တွင် တည်ဆောက်ထားသည့် များစွာသော စက်ရုံအလုပ်ရုံများမှ သန့်စင်ခြင်း မရှိသည့် ရေဆိုးများကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ၊ ယင်းရေကန်ကြီးသည် လက်ဘနွန်နိုင်ငံ၏ အရှည်ဆုံးမြစ်ကြောင်းတစ်ခုပေါ်၌ တူးဖော်ထားသည့် ရေလှောင်တမံအမျိုးအစား လူလုပ် ရေကန်ကြီးတစ်ကန်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
BEIRUT, May2(Xinhua) -- A large number of dead fish have been recently washed ashore at the Lake Qaraoun in West Bekaa, Lebanon, sounding an alarm about the worsening environmental pollution there.
The massive fish deaths are believed to be caused by the untreated water discharged by dozens of factories into the Litani River which leads to Lake Qaraoun, an artificial lake created byadam on the longest river in Lebanon.
(1)Dead fish caused by water pollution are seen at Lake Qaraoun in west Bekaa, Lebanon, April 30, 2021. (Photo by Taher Abu Hamdan/Xinhua)
(2.3.4) Workers clear dead fish from Lake Qaraoun in west Bekaa, Lebanon, on April 30, 2021. (Photo by Taher Abu Hamdan/Xinhua)
(5.6) Dead fish are collected and buried inapit near Lake Qaraoun in west Bekaa, Lebanon, April 30, 2021. (Photo by Taher Abu Hamdan/Xinhua)
Previous Article (နိုင်ငံတကာသတင်းသုံးသပ်ဆောင်းပါး) အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ တာဝန်ယူမှုမရှိစွာ တပ်ဖွဲ့ဝင်များပြန်လည်ရုပ်သိမ်းမှုကြောင့် နိုင်ငံနက်ရှိုင်းစွာနွံနစ်သွားမည်ကို အာဖဂန်စ္စတန်ပြည်သူများ စိုးရိမ်ပူပန်
Next Article နှစ်ပေါင်း (၂၀)နီးပါးကြာ စစ်ပွဲအဆုံးသတ်၊ အာဖဂန်ရှိ နောက်ဆုံးအသုတ် အမေရိကန် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ရုပ်သိမ်း